मनोरन्जन – mero sathi tv
६ जना बालक फ्यानहरु नम्रताको घरसम्मै पुगे
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:५५ April 30, 2018
LeaveaComment on ६ जना बालक फ्यानहरु नम्रताको घरसम्मै पुगे
चलचित्र क्षेत्रमा पसीसकेपछी सबैले चिन्ने गर्दछन । सबैले चिनी सके पछी सेलिब्रेटी हुइन्छ र फ्यानहरु पनि हुने गर्दछन । तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने कोहि फ्यानहरु त्यस्ता पनि हुने गर्दछन् कि सेलिब्रेटीको घरसम्मै पुग्ने गर्दछन । केहिदिन अघि नायिका प्रियंका कार्कीले फ्यानको कारणले बसेको घर सर्नुपरेको बताउँदै आउँदा अर्की नायिका नम्रता सापकोटाको घरसम्मै फ्यानले पछ्याएका […]
प्रिया प्रकाशको दोस्रो भिडियो पनि भाइरल बन्दै
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:४८ April 30, 2018
LeaveaComment on प्रिया प्रकाशको दोस्रो भिडियो पनि भाइरल बन्दै
दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियरको आखा झिम्क्याएको भिडियो भाइरल भएपछी उनि रातारात चर्चित बनिन् । उनको अर्को भिडियो पनि भाइरल भईरहेको छ । नयाँ भिडियोमा प्रिया प्रकाश उही पुरानो भिडियोमा जस्तै ड्रेस र उस्तै स्टाइलमा देखिएकी छिन् । नयाँ भिडियोमा पनि उनका ब्वाइफ्रेण्ड उनै रोशन अब्दुल नै छन् । भिडियोमा स्कुल युनिफर्ममा […]
एक सुपरमोडल हुन् अनिल कपुरकी श्रीमती, डेटमा जाँदा खाना देखि सारा खर्च आफै उठाउने गर्थिन ! यस्तो छ अनिल कपुरको प्रेम कथा
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १२:०० April 30, 2018
LeaveaComment on एक सुपरमोडल हुन् अनिल कपुरकी श्रीमती, डेटमा जाँदा खाना देखि सारा खर्च आफै उठाउने गर्थिन ! यस्तो छ अनिल कपुरको प्रेम कथा
बलिउडमा धेरै स्टारको बीच प्रेमसम्बन्ध पछि बिहेसम्म भएको छ। तर केहि यस्ता नायक र नायिका छन् जसले आफ्नो जीवनसाथी फिल्मी जगत भन्दा बाहिरबाट छानेका छन्। एक झक्कास नायक अनिल कपूरको श्रीमती पनि हुन् जो एक समय अनिल कपुरको पुरा खर्च उठाउने गर्थिन। अनिल कपूरले एक मोडलसँग विबाह गरेका हुन जसको नाम सुनिता हो। जब अनिलले […]
पुजा भन्छिन्ः अफेयरमा छैन। म २६ वर्ष लागे
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १०:२० April 30, 2018
LeaveaComment on पुजा भन्छिन्ः अफेयरमा छैन। म २६ वर्ष लागे
नायिका पुजा शर्मा आजबाट २६ वर्षमा लागेकी छिन् । नेपाली चलचित्रमा एक दशक गुजारिसके पनि उनले आधा दर्जन चलचित्रमा मात्रै अभिनय गरेकी छिन् । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, फिल्म इन्डष्ट्रीमा पुजाको इन्ट्री एउटी पत्रकारको रुपमा भएको थियो । उनी हिमालय टेलिभिजनमा फिल्मसम्वन्धि रिपोर्टिङ गर्ने गर्थिन् । यही क्रममा उनले पहिलोपटक थ्री लभर्समा अभिनय गरिन् । […]
रुपन्देहीका रोहन डीआईडीको टप ८ मा
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ०९:५४ April 30, 2018
LeaveaComment on रुपन्देहीका रोहन डीआईडीको टप ८ मा
रुपन्देहीको कोटिहवाका रोहन थापा भारतीय टेलिभिजन जि टिभिबाट प्रसारण हुने चर्चित डान्स रियालिटी शो ‘डिआईडी लिटिल मास्टर्स सिजन-४’ को टप ८ मा पुगेका छन् । भारतका दुई लाख भन्दा बढी प्रतियोगीमाझ अब्बल ठहरिंदै रोहन उत्कृष्ट ८ जनामा छनोट हुन सफल भएका हुन् । रोहनसहितका टप ८ सँगै वाइल्ड कार्डमार्फत ल्याइएका ४ जना समेत गरी १२ […]
‘हैरान’को ‘हिरो’ गीत रिलिज, को-को बन्न खोज्दैछन् हिरो ?
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ०९:२९ April 30, 2018
LeaveaComment on ‘हैरान’को ‘हिरो’ गीत रिलिज, को-को बन्न खोज्दैछन् हिरो ?
जेठ ४ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको चलचित्र ‘हैरान’को दोश्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । यो गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु गजित बिष्ट, निश्मा घिमिरे, वुद्दि तामाङ, सागर लम्साल र पुस्कर रेग्मीलाई फिचरिङ गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको ‘हिरो’ गीतमा संगीत र स्वर राजन इशानको छ भने गम्भिर बिष्टको शब्द छ । चलचित्रको परिस्थिती अनुसारको गीत […]
प्रियंका बनिन् ब्रिटानियाकी सद्भावना दुत, ३२ लाखमा सम्झौता ?
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ०९:२५ April 30, 2018
LeaveaComment on प्रियंका बनिन् ब्रिटानियाकी सद्भावना दुत, ३२ लाखमा सम्झौता ?
नेपाली सेलिब्रिटीहरु ब्रान्ड दुनियाँमा खासै जम्न सकेको पाइदैन । बलिउडका कलाकारको आम्दानीको ठूलो श्रोत विज्ञापन भएपनि नेपाली कलाकारका लागि अझै यो दुनियाँ सपनामै छ । तर, पछिल्ला केही समययता भने विज्ञापन कम्पनीहरुले नेपाली कलाकारलाई पनि विश्वास गर्न थालेका छन् । यसैले, केही कलाकारको आम्दानीको बाटो पनि फराकिलो बन्दै गएको छ । हालै नायिका प्रियंका कार्कीले […]
मिलन चाम्स र नायक प्रदिप खड्काबीच पानी बाराबारको अवस्था रहेको रहस्य खुल्यो (भिडियो)
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ०९:१० April 30, 2018
LeaveaComment on मिलन चाम्स र नायक प्रदिप खड्काबीच पानी बाराबारको अवस्था रहेको रहस्य खुल्यो (भिडियो)
बिहीबार आयोजित एनएफडीसी अवार्ड समारोहमा निर्देशक मिलन चाम्स र नायक प्रदिप खड्काबीच पानी बाराबारको अवस्था रहेको रहस्य खुल्यो । पत्रकारहरूको जोडबलमा उनीहरूले सँगै फोटो खिचाए पनि कुरा गर्नु त परै जाओस्, एक-अर्काको अनुहार समेत हेरेनन्। चलचित्र ‘लिलिबिली’ मा सहकार्य गरेका उनीहरूको के कारणले सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने चाहिँ खुलेको छैन । एक अनलाइनसँग कुरा गर्दै निर्देशक […]
यती सानो बालिकाको यस्तो खत्रा प्रतिभा ?
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ०६:५७ April 30, 2018
LeaveaComment on यती सानो बालिकाको यस्तो खत्रा प्रतिभा ?
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल त्यसैगरी युटुवहरुमा भाइरल बनिरहेकी काभ्रे नबोबुद्ध नगरपालीका खरीबोटकी बालगायिका हुन् प्रयुसा न्यौपाने । सानो उमेरमा नै निकै अदभूत गायन क्षमताका भएकै कारण, छोटो समयमा नै उनी चर्चामा शिखरमा रहेकी छन्। उनको चर्चा आजभोली बजार भरी चुलिएको छ। उनी एकाएक चर्चामा आएकी हुन् उनको आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिरहेको भिडियोका मार्फत। प्रयुसा अहिले […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ०६:४८ April 30, 2018
१७ वैशाख, बुटवल । रुपन्देहीको कोटिहवाका रोहन थापा भारतीय टेलिभिजन जि टिभिबाट प्रसारण हुने चर्चित डान्स रियालिटी शो ‘डिआईडी लिटिल मास्टर्स सिजन-४’ को टप ८ मा पुगेका छन् । भारतका दुई लाख भन्दा बढी प्रतियोगीमाझ अब्बल ठहरिंदै रोहन उत्कृष्ट ८ जनामा छनोट हुन सफल भएका हुन् । रोहनसहितका टप ८ सँगै वाइल्ड कार्डमार्फत ल्याइएका ४ […]
कालोपोतो र डन्डीफोर हटाउने घरेलु उपायहरू आलु देखि ल्वाङसम्म
डन्डीफोर र कालोपोतोले हैरान हुनुहुन्छ ? अब घरमै बसेर यसरी हटाउनुहोस, यस्ता छन डाक्टर बस्नेतका सुझाव (भिडियो )
सौन्दर्यका लागि काँक्रोको प्रयोग विधि पढ्नुहोस !!
झुल टाङ्ने र धुप बालेर लामखुट्टे हटाऊने झण्जटबाट मुक्त हुन अपनाऊनुहोस् अति नै सजिलो घरे उपाय
लसुन र मह मिलाएर खानु स्वस्थ्यका लागि अमृत समान, यस्ता छन् फाइदै फाइदा
तपाईलाई गोरो हुने मन छ ? घरेलु ३ सरल र अदभुत उपायहरु जसले तपाइको अनुहारनै परिवर्तन गरिदिन्छ
सहि समयमा खिचिएका उत्कृष्ट १५ तस्बिरहरु हेर्नुहोस्
एक हप्तामै यसरी हटाउनुहोस् अनुहारमा भएको छिद्र